Nguwuphi umahluko phakathi kwe-80 kunye ne-20 ephakathi?
ngomphathi ku 20-11-11
Masifunde malunga phakathi kwe-80 (ekwabizwa ngokuba yi-Tween 80 okanye i-polysorbate 80) kunye ne-Tween 20 (ekwabizwa ngokuba yi-Tween 20) ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Yindibaniselwano phakathi kwe-20: umxube we-polyethyl ...
Ukusetyenziswa kwearhente yokukhutshwa kwangaphakathi yesilicone kwishishini lokuvelisa
Ixesha elide, icandelo lemveliso lilumke kakhulu malunga nokusetyenziswa kwearhente yangaphakathi yokukhutshwa kwesilicone. Oku kunokuba nokuninzi okunokuthanani nokuqonda okwahlukileyo kunye nokusetyenziswa kwemveliso Kukho ukungaqondani okuninzi malunga ne-arhente yokukhupha kwi-silica gel One. Kwimpembelelo ye-pri ...
Kwi-2025, ixabiso lentengiso lehlabathi le-carbomer kulindeleke ukuba lenyuke liye kwi-yuan ye-10.34 yezigidigidi
Ubungakanani bemarike yeQingdao carbomer bukhulu. Kufunyenwe ukuba kwiminyaka emihlanu ezayo, kuyakubakho intengiso ye-yuan ye-10.34 yezigidigidi eza kuphuhliswa ngo-2025.
Ziziphi iimpembelelo zemilingo zecarbomer?
IKapom ikuyo yonke indawo kubomi bethu bemihla ngemihla, ngaba uyiqaphele? Namhlanje siza kufunda malunga NOKUSETYENZISWA kwale kapom imangalisayo noMongameli uHu kwi-Inoxon New Materials. 1.Khusela ulusu lwakho i-Kapok inefuthe elibonakalayo lokukhusela ulusu lomzimba womntu, inolwalamano oluthile kulusu lomzimba womntu, ...
Isishwankathelo se-PEG, ngaba uyafuna ukwazi?
I-Peg-200: Ingasetyenziselwa njengendawo yokuhlanganisa izinto eziphilayo kunye nomphathi wobushushu oneemfuno eziphezulu. Ingasetyenziswa njenge-humectant, isinyibilikisi esongeza ityuwa engaqhelekanga kunye nolawulo lwe-viscosity kumzi mveliso weekhemikhali wemihla ngemihla. Isetyenziswa njengethambisi kunye nearhente ye-antistatic kwishishini lempahla eyolukiweyo; Isetyenziswa njengokumanzisa ag ...
Qonda izibonelelo zokusebenza kwe-polyethylene glycol, kwimveliso yesiseko esihle!
I-Polyethylene glycol (i-PEG) yipolymer ye-ethylene oxide kunye namanzi. Yiparafini emhlophe okanye umgubo oqinileyo, ongenavumba okanye onevumba elibuthathaka. Ayiyityhefu, ayicaphukisi, inokunyibilika kwamanzi, kwaye inokuhambelana okuhle nezinto ezininzi eziphilayo. Zisetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso ...